Mpanolotsaina monisipaly sady mpitarika amin’ny fiarovana ny zon’olombelona novonoina tao afovoan-tanànan’i Rio de Janeiro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 18:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, Français, English
Marielle Franco miteny nandritra ny fampielezan-kevitra tao Rio de Janeiro, Brezila tamin'ny 2016. Sary: Mídia Ninja / Flickr CC BY-SA 2.0
Latsaky ny adiny roa talohan'ny namonoana azy ny alin'ny 14 Martsa, mbola naneho hevitra teo amin'ny dinidinika ambany tafontranon'ny mpitolona mainty hoditra mikasika “ny vehivavy tanora mainty hoditra manetsika ny rafitra” i Marielle Franco, mpanolo-tsaina monisipalin'i Rio de Janeiro.
Raha nandao ny toerana i Marielle Franco, nisy fiara iray nijanona teo akaikin'ny fiarany, ary nitifitra in-tsivy. Maty teo noho eo i Franco sy ny mpamiliny, Anderson Gomes. Nipitihan'ny fitaratra sy naratra ilay mpanatri-maso akaiky ny mpanolotsaina izay tao ambadika saingy tafavoaka velona.
Ahitana ny marika rehetra amin'ny famonoana olona, niteraka dona nanerana an'i Brezila ny fanafihana ka tafiditra tao anatin'izany ny tambajotra sosialy. Nomanina nandritra ny roa andro aoriana ny hetsika nasionaly. Ary maherin'ny 70 000 olona sy fikambanana nanamafy ny fahatongavan'izy ireo amin'ny fihetsiketsehana ao Rio de Janeiro.
Nofidin'ny Antoko Sosialista sy Fahalalahana (PSOL) amin'ny maha-mpanolotsaina fahadimy be mpifidy indrindra ao Rio de Janeiro i Marielle Franco tamin'ny 2016, renivohitra faharoan'i Brezila ary misy mponina maherin'ny enina tapitrisa.
Amin'ny maha mpitolona mainty sy lesbiena azy, dia niaro ireo ampahany maromaro avy amin'ny mponina tao amin'ny politikam-panjakana ao Brezila izy ary tian'ny mpikatroka manerana ny firenena.
Fahatsiarovana ilay mpitsikera sy mpitolona tsy azo ahifika
Teraka sy lehibe tany amin'ny Favelan'i Maré i Marielle Franco, io no favela lehibe indrindra ao Rio de Janeiro izay iainan'ny olona 130 000. Tamin'ny taona 2005, maty nandritra ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanondrana zava-mahadomelina ny namany akaiky indrindra. Nanosika azy hiaro ny zon'olombelona io fotoana io ary hiady amin'ny herisetra ataon'ny polisy.
Nanakiana ny herisetra mahafaty ataon'ny polisin'i Rio, voatendry ho mpitatitra voalohany ny vaomieran'ny Antenimiera monisipaly breziliana misahana ny fanaraha-maso ny fidirana an-tsehatra miaramila any Rio de Janeiro izy tamin'ny Febroary 2018.
Nandray ny fifehezana ny filaminan'ny tanàna ny tafika Breziliana tamin'ny fiandohan'ny febroary ho setrin'ny herisetran'ireo andian-jiolahy na dia teo aza ny tsikera avy amin'ireo FTMF (Fifandaminana tsy miankina amin'ny fanjakana) ao an-toerana sy ny filankevitry ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena mikambana.
Nanakiana ampahibemaso ny fidirana an-tsehatry ny tafika izy ary nampitaha izany tamin'ny bemidina mitovy amin'izany tao amin'ny Favelan'i Maré nahaterahany nandritra ny Mondialy 2014.
Maneho hevitra tsy ankijanona eny an-tsehatra sy ao amin'ny pejin'ny tambajotra sosialy i Franco, manohitra ny famonoana ivelan'ny fitsarana ny mponina mahantra sy indrindra ny mainty hoditra ao amin'ny Favelan'i Rio.
Vao tamin'ity herinandro ity, nandefa andian-dahatsoratra Facebook momba ny herisetra mitohy ao amin'ny favelan'i Acari izy:
Tamin'ity herinandro ity, tanora lehilahy roa no maty sy natsipy tanaty lavaka. Amin'izao, mivezivezy eny an-dalana ny polisy ary mandrahona ny mponina.
Nisarika ny saina hijery ny lahatsoratra iray mikasika ny fitifirana dimy tao amin'ny favela ao anatin'ny herinandro i Franco:
Hafatra farany nataon'i Marielle tao amin'ny Facebook mikasika ny herisetra ataon'ny polisy ao amin'ny favelan'i Acari. Sary: pikantsary Facebook
Ampangain'i Franco ny famonoana ataon'ny polisin'i Brezila
Mahavariana ny famonoana mahafaty ataon'ny polisy ao Brezila. Tamin'ny taona 2016, famonoana olona miisa 920 no voaisa ho nataon'ny polisy tany Rio de Janeiro, raha 419 izany tamin'ny taona 2012, araka ny Amnesty International. Tatitra avy amin'ny Forum momba ny filaminam-bahoaka, misy ivontoeram-pikaroham-pirenena nanisa fa 4 224 ny vono olona nataon'ny polisy manerana ny firenena tamin'ny taona 2016, ka 99% lehilahy ary 76% ny mainty hoditra. Maro amin'ireo famonoana ireo no azo ampitoviana mitovy amin'ny famonoana ivelan'ny fitsarana, izay voatondro ho heloka amin'ny lalàna iraisampirenena.ary azo lazaina ho heloka bevava amin'ny lalàna iraisampirenena.
Nampiasa tenirohy ao amin'ny media sosialy nitaky fanadihadiana lalina tamin'ny famonoana an'i Franco ireo fikambanana, antoko politika ary sivily.
Niteny tao amin'ny Facebook ny tambajotram-behivavy mpahay lalàna:
Mihoatra noho ny hetsika mivantana hanoherana ny herisetra mahazo ny mainty hoditra any Rio ny lanjany ara-politika. Marielle, amin'ny maha vehivavy mainty hoditra azy, no nisolo tena ny vehivavy an-tapitrisany tsy misy feo politika ao amin'ny fanjakana, namotika ny dina fanilikilihana ny mainty nohamafisin'ny fanavakavahana tao Brezila, izay nosaronan'ny anganon'ny demaokrasia ara-poko.
Nitaky famotorana ihany koa ny biraon'ny Amnesty International ao Brezila:
Tsy tokony hisy fisalasalana momba ny toe-javatra, ny antony manosika ary izay miahy ny famonoana an'i Marielle Franco
Namoaka fanambarana ofisialy Ny antokony, ny PSOL milaza fa ny tsy azo esorina ny hoe “heloka politika” satria “vao avy nitory ny hetsika maherisetra” nataon'ny polisy izy.
Lehibe tao amin'ny Complex Maré favela lehibe indrindra any Rio de Janeiro i Marielle Franco. Sary: Mídia Ninja CC BY-SA 2.0
“Tsy mahandry 10 taona fanampiny izahay na hieritreritra fa eo aho amin'ny raharaha 10 hafa”
Mahatsiaro ilay sosiology sady manam-pahaizana manokana amin'ny filaminam-bahoaka Luiz Eduardo Soares, namana akaiky an'i Franco, fa mampahatsiahy an'izay nahazo ny mpitsara Patricia Acioli, izay namoy ny ainy tamin'ny fifampitifirana tamin'ny taona 2011 koa ity famonoana olona ity. Nanara-maso raharaha maromaro mahakasika ny vondrona milisy tao Rio i Accioli tamin'izany fotoana izany.
Rahoviana no hifoha ny vahoaka, Andriamanitro ô, ary hahatakatra fa manomboka amin'ny sokajin'olona be kolikoly indrindra sy mahery setran'ny polisy ny tsi-filaminam-bahoaka, ary tsy afaka miaina amin'ity lova mahatsiravin'ny jadona ity isika? Mbola hanohy hiresaka momba ny “fivilian-dalan'ny tsirairay” ve isika? Inona no azontsika atao afa-tsy ny mitomany?
Nandritra ny dinidinika ambany tafontrano nifanaovan'ireo mainty hoditra mpikatroka izay nohatevenin'i Franco laharana ora vitsy talohan'ny namonoana azy no nilazany fa:
Manana hetsika manosika ny vehivavy maro kokoa hiditra amin'ny politika, amin'ny toeram-pahefana, mba hisian'ny vehivavy maro kokoa amin'ny toerana fanapahan-kevitra, satria izany no hany làlan-tokana hahazoana politikam-panjakana manam-pahaizana kokoa.
Nahatsiaro ireo vehivavy mainty roa mpanao politika tonga tao aminy i Franco, izay misy hatramin'ny folo taona ny elanelan-taonan-dry zareo, nanentana hoe:
Tsy mahandry ny folo taona fanampiny na hieritreritra fa mbola eo aho amin'ny raharaha folo hafa fanampiny